के खोप लगाएपछि पनि कोरोनाभाइरस फैलिन सक्छ ? यो सम्भव हुन सक्छ । विज्ञहरुका अनुसार यस्तो जोखिमको सम्भावना कम छ तर उनीहरु यसबारेमा अझै अध्ययन गर्दैछन् । यद्यपि वर्तमान खोपहरू मानिसहरूलाई कोरोना संक्रमणको गम्भीर बिरामी हुनबाट बचाउन भने अत्याधिक प्रभावकारी छ ।
तर खोप लगाईएको मानिस बिरामी नपरे पनि तिनीहरू लक्षणबिना नै संक्रमित भएका हुन सक्छन् । विज्ञहरूको भनाइमा खोपले ती व्यक्तिहरुबाट भाइरस फैलाउने सम्भावनालाई पनि धेरै हदसम्म रोक्दछ ।
‘खोप लगाएको व्यक्तिले भाइरसलाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्छ, त्यसैले सो व्यक्तिबाट फैलिने सम्भावना धेरै कम हुन्छ’, मेरीलल्याण्ड स्कूल अफ मेडिसिन विश्वविद्यालयका भाइरस विशेषज्ञ डा. रोबर्ट गाल्लोले भने ।
अहिलेसम्मका गरिएका विभिन्न अध्ययनबाट भेटिएका प्रमाणहरुले सुझाव दिन्छन् कि यदि खोप लगाइएका मानिसहरू संक्रमित भएको खण्डमा पनि उनीहरुको नाकभित्र भाइरसको मात्रा खोप नलगाएकाहरुभन्दा कम नै हुने गर्दछ जसका कारण फैलावटको सम्भावना कम हुन्छ ।
अनिश्चितता र अधिक संक्रामक भेरियन्टहरूको आगमनलाई ध्यानमा राख्दै विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि पूर्ण रूपमा खोप लगाइएका व्यक्तिहरूले पनि हेलचेक्राइँ नगरी सार्वजनिक स्थानमा जाँदा मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी कायम गरिराख्नुपर्दछ । खोप नलगाएका व्यक्तिहरुसँग भेट गर्दा पनि सोही मापदण्डको पालना गर्नु पर्दछ ।
‘हामी अझै सतर्क हुनुपर्दछ’, डा. गाल्लोले भने, ‘खोप आवश्यक छ । तर यो महामारीलाई भोलि नै समाप्त पार्ने उपचार विधि हैन ।’